“ဟန်သီရဲ့ စစ်ကောင်စီဖျော်ဖြေပွဲမှာ ဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းကို နားထောင်မိပြီး ငိုနေရတယ်လို့ဆိုလာတဲ့ ပရိသတ်တစ်ဦး” ( ရုပ်သံ ) – Cele Lover
“ဟန်သီရဲ့ စစ်ကောင်စီဖျော်ဖြေပွဲမှာ ဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းကို နားထောင်မိပြီး ငိုနေရတယ်လို့ဆိုလာတဲ့ ပရိသတ်တစ်ဦး” ( ရုပ်သံ )
“ဟန်သီရဲ့ စစ်ကောင်စီဖျော်ဖြေပွဲမှာ ဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းကို နားထောင်မိပြီး ငိုနေရတယ်လို့ဆိုလာတဲ့ ပရိသတ်တစ်ဦး”
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ ဖျော်ဖြေ..ပွဲတစ်ခုကို သွားရောက် ဖျော်ဖြေခဲ့လို့ လှောင်ပြောင်လာ.သူတစ်ဦး
ပရိသတ်ကြီးရေ..ဒီတစ်ခါမှာတော့ ချစ်စရာအရမ်းကောင်းတဲ့သူလေးကတော့ .ဟန်သီလေးပဲ ဖြစ်ပါ.တယ်။
သူမဟာနိုင်ငံဂုဏ်ဆောင် အလှမယ်လေးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဆုတံဆိပ်တွေများစွာကို လည်း.ရှိပိုင်ဆိုင်ထား.သူလေးတစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါ.ဘူးနော်။ထူးချွန်ထက်မြတ်တဲ့သူ .တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဖြတ်ထိုးဥဏ်ကောင်းသူလေးလည်း ဖြစ်သလို
စိတ်သဘောထားလေး.ကလည်း နူးညံ့သိမ်မွေ့.သူလေး တစ်ယောက်လည်း. ဖြစ်ပါ.တယ်။သူမဟာတိရိစ္ဆာန်လေးတွေကို.လည်း .အသည်းယား.စွာချစ်တတ်သူလေး.ဖြစ်ပြီးကလေးလေး.တစ်ယောက်လို .ဖြူစင်တဲ့အပြုံး.လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလေး.လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ .အပြုံးချိုချို.လေးတွေကြောင့်လ.ည်းပရိသတ်ကြီးရဲ့ အသဲစွဲလေးတစ်ယောက်ဆို လည်းမမှားပါဘူးနော်။သူမရဲ့ဝင်းဝါစိုပြေနေတဲ့.အသားရေလေးကြောင့်လ.ည်း အဖြူရောင်စွယ်တာ.လက်ရှည်လေးနဲ့ လိုက်ဖက်မှု.ရှိနေပြီး အေးချမ်းလှပနေတာပဲဖြစ်ပါ.တယ်။
ပေါ့ပါးတဲ့ဖက်ရှင်လေးနဲ့.လည်း အများကြားမှာ.ထင်ပေါ်နေကာ နတ်သတ်ကြွေ.တဲ့ အလှ.လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထား.သူလေးဆိုလည်း မမှားပါဘူးနော်။သေးသွယ်ကျစ်လစ်တဲ့ .ကိုယ်လုံးလေးကြောင့်လည်း ဘာလေးဝတ် ဝတ်လှပနေသူလေးဖြစ်ပြီး မိန်းကလေး.တိုင်းအားကျရတဲ့ သူလေးဖြစ်ပါတယ်။
ဟန်သီလေးကတော့ ပရိသတ်တွေNရဲ့ အချစ်တွေကို အပြည့်အဝရရှိထားသူလေးဖြစ်သလိုသူမကလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ ပြောဆိုတတ်တာ.ကြောင့် အချစ်ပိုနေရသူလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါ.တယ်။ခုအခါမှာတော့ သူမက အာဏာသိမ်း.စစ်ကောင်စီရဲ့ ဖော်ဖြေပွဲတစ်ခုကို သွားရောက် ဖျော်ဖြေ.ခဲ့လို ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုဒဏ်ကို ခံနေရတာ.ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခုအခါမှာ ပရိသတ်တစ်ယော.က်က .ခုလိုမျိုး ဟာသလေးတဲ့ တင်လာတာ ဖြစ်ပါ.တယ်
ဘယ်သူ ငိုနေမှန်း….မသိပေမဲ့ နားထောင်မိတဲ့ငါတော့ .. ငိုနေပီး ဆိုပြီး ပြောနေကြပ်တယ် videoအောက်တွင်ကြည့်ပါ
“ဟန္သီရဲ႕ စစ္ေကာင္စီေဖ်ာ္ေျဖပြဲမွာ ဆိုခဲ့တဲ့ သီခ်င္းကို နားေထာင္မိၿပီး ငိုေနရတယ္လို႔ဆိုလာတဲ့ ပရိသတ္တစ္ဦး”
အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီရဲ႕ ေဖ်ာ္ေျဖ..ပြဲတစ္ခုကို သြားေရာက္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့လို႔ ေလွာင္ေျပာင္လာ.သူတစ္ဦး
ပရိသတ္ႀကီးေရ..ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ခ်စ္စရာအရမ္းေကာင္းတဲ့သူေလးကေတာ့ .ဟန္သီေလးပဲ ျဖစ္ပါ.တယ္။
သူမဟာႏိုင္ငံဂုဏ္ေဆာင္ အလွမယ္ေလတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဆုတံဆိပ္ေတြမ်ားစြာကို လည္း.ရွိပိုင္ဆိုင္ထား.သူေလးတစ္ေယာက္ဆိုလည္း မမွားပါ.ဘူးေနာ္။ထူးခြၽန္ထက္ျမတ္တဲ့သူ .တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ျဖတ္ထိုးဥဏ္ေကာင္းသူေလးလည္း ျဖစ္သလို
စိတ္သေဘာထားေလး.ကလည္း ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕.သူေလး တစ္ေယာက္လည္း. ျဖစ္ပါ.တယ္။သူမဟာတိရိစာၦန္ေလးေတြကို.လည္း .အသည္းယား.စြာခ်စ္တတ္သူေလး.ျဖစ္ၿပီးကေလးေလး.တစ္ေယာက္လို .ျဖဴစင္တဲ့အၿပဳံး.ေလးေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူေလး.လည္းျဖစ္ပါတယ္။
ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ .အၿပဳံးခ်ိဳခ်ိဳ.ေလးေတြေၾကာင့္လ.ည္းပရိသတ္ႀကီးရဲ႕ အသဲစြဲေလးတစ္ေယာက္ဆို လည္းမမွားပါဘူးေနာ္။သူမရဲ႕ဝင္းဝါစိုေျပေနတဲ့.အသားေရေလးေၾကာင့္လ.ည္း အျဖဴေရာင္စြယ္တာ.လက္ရွည္ေလးနဲ႔ လိုက္ဖက္မႈ.ရွိေနၿပီး ေအးခ်မ္းလွပေနတာပဲျဖစ္ပါ.တယ္။
ေပါ့ပါးတဲ့ဖက္ရွင္ေလးနဲ႔.လည္း အမ်ားၾကားမွာ.ထင္ေပၚေနကာ နတ္သတ္ေႂကြ.တဲ့ အလွ.ေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထား.သူေလးဆိုလည္း မမွားပါဘူးေနာ္။ေသးသြယ္က်စ္လစ္တဲ့ .ကိုယ္လုံးေလးေၾကာင့္လည္း ဘာေလးဝတ္ ဝတ္လွပေနသူေလးျဖစ္ၿပီး မိန္းကေလး.တိုင္းအားက်ရတဲ့ သူေလးျဖစ္ပါတယ္။
ဟန္သီေလးကေတာ့ ပရိသတ္ေတြNရဲ႕ အခ်စ္ေတြကို အျပည့္အဝရရွိထားသူေလးျဖစ္သလိုသူမကလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ ေျပာဆိုတတ္တာ.ေၾကာင့္ အခ်စ္ပိုေနရသူေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါ.တယ္။ခုအခါမွာေတာ့ သူမက အာဏာသိမ္း.စစ္ေကာင္စီရဲ႕ ေဖာ္ေျဖပြဲတစ္ခုကို သြားေရာက္ ေဖ်ာ္ေျဖ.ခဲ့လို ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ေဝဖန္မႈဒဏ္ကို ခံေနရတာ.ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ခုအခါမွာ ပရိသတ္တစ္ေယာ.က္က .ခုလိုမ်ိဳး ဟာသေလးတဲ့ တင္လာတာ ျဖစ္ပါ.တယ္
ဘယ္သူ ငိုေနမွန္း….မသိေပမဲ့ နားေထာင္မိတဲ့ငါေတာ့ .. ငိုေနပီး ဆိုၿပီး ေျပာေနၾကပ္တယ္ videoေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ
Previous Article ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ကာ ဖေ့ဘွတ်တင်သည့် စစ်သား
Next Article ချစ်စရာကောင်းတဲ့သားချောလေးကိုအောင်မြင်စွာ မွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်